Madal Dhacdooyinka Furashada & Isugeynta ee Kobaca | Degdegsiiya
Maxaa Dardar Galiya
Qaabdhismeedka Dardargelinta Kobaca
Dhacdooyinka isku dhafan
Siminaaro & Tababar
Tigidhada & Diiwaangelinta
Marxaladda Weyn & Burburka
Isku-dhafan Live Streaming
Ka Qeybgalka Ka Qeybgalka
Bandhigayaasha & Damaanadqaadayaasha
Qiimaha Ku Darso
Amniga & Asturnaanta
login Isku day bilaash Buug demo ah
Isku day bilaash Buug demo ah
Barnaamijyada dhacdooyinka Virtual & hybrid in koritaanka ayuu wadaa.
Accelevents waa barnaamij munaasabado hal-hal ah ah oo awood kuu siinaya inaad ballaariso gaadhistaada, kaqeyb galiso dhagaystayaashaada, abuuritaanka bulsho weligeed cagaaran, iyo inaad waddo koritaan urur oo waara.
Madasha # 1 Dhacdooyinka loogu talagalay Dardargelinta Kobaca
Dhacdo kastaa waxay la timaaddaa caqabado iyo himilooyin gaar ah oo u gaar ah. Waxaan si gaar ah ugu talagalnay barxadeena si aan uga caawino kooxaha dhacdooyinka inay dardar geliyaan yoolalka kobcintooda iyadoo la yareynayo dhibaatooyinka sida caadiga ah la xiriira tikniyoolajiyada dhacdada. Kordhi gaadhistaada, kaqeybgal kaqeybgalayaashaada, soona saar hogaamiyayaal aqoon leh, kadhig kuwa ku kafaala qaadaya kuwa faraxsan, kunaqeeji dakhligaaga Accelevents.
Eeg Qaabdhismeedka Dardargelinta Kobacayaga
Hoolka Expo & Damaanadqaadayaasha
Ku dar hal-abuurkaaga iyo khibraddaada madal aan xad lahayn.
Naqshadee jawi dhacdo dijitaal ah oo taagan oo leh astaantaada oo aan lahayn lambar.
Iibi tikidhada, diiwaangeli kaqeybgalayaasha, oo aad uqeybiso dhageystayaashaada daqiiqado gudahood.
Kooxda iyo 1: 1 Xiriirinta
Kordhi dareenka bulshada inta ay munaasabadu socoto si aad u abuurto xiriiro waara.
Kordhi dakhligaaga adoo u keenaya qiimo kor u kacay oo la qiyaasi karo bandhigayaasha iyo kafaala qaadayaasha.
Ku dhiirrigeli ka-qayb-galayaashaada inay fuliyaan ficillo gaar ah oo ku abaalmarin doona hawl-gelintooda.
Isla markiiba marin u hel xogta dhacdadii ugu dambeysay si aad si fiican ugu fahamto waxqabadkaaga.
Khibradda Calaamadda Cad
Daahfurka jawi munaasabad si buuxda u calaamadeysan sida haddii ay tahay tiknoolajiyad kuu gaar ah.
Marti gal dhacdo aamin ah, aamin ah, oo u hogaansan heerarka caalamiga ah.
Isku-dhafka aan xuduud lahayn
Ku xooji adoo ku dhexjiraya teknolojiyadaada isla markaana maareynaya qolka oo dhan.
Customer Taageerada wuxuu ku jiraa DNA-kayaga
24/7 Taageero dhab ah oo laga helo Dadka dhabta ah
Kooxdayada taageerada u heellan marwalba waxay leeyihiin dhabarkaaga, iyadoon loo eegin maalinta ama waqtiga (halkan bots malaha!).
Faahfaahin Saldhig Aqoon iyo Su'aalo
Soo gal aruurinta dukumiintiyada wax soo saarka si aan u taageerno horumarkaaga munaasabad kasta oo wadada ah.
Fahanka Warshadaha, Kheyraadka Faa'iidada Leh, iyo Cusbooneysiinta Wax soo Saarka
Baro sida loo abuuro dhacdooyin aan caadi ahayn oo ku lug leh dhagaystayaashaada oo aad ka hesho natiijooyin la qiyaasi karo.
In ka badan 12,500 shirkadaha iyo ururadu waxay ku aaminaan Accelevents dhacdooyinkooda.
Macaamiisheena ayaa hadlay…
Xirmo dhameystiran oo si fudud loo isticmaali karo loona dejin karo. Had iyo jeer waa la hagaajiyaa. Taageeradu wey fiicneyd!
Maareynta Hay'adda aan macaash doonka ahayn
Aad u fududahay in la isticmaalo, si dhakhso ah oo fududna loo barto, adeegga macaamiisha ee cajiibka ah, shaqaale aad u aqoon badan oo si dhakhso leh uga jawaabay dhammaan su'aalahayga, iyo qiime aad u fiican.
Isbahaysiga Dhaawaca Maskaxda ee Waqooyiga Kentucky
Astaamaha barxadda waa fududahay in la dejiyo, hal abuurna waa loo qaabeeyaa, waxayna u oggolaataa fududeeynta isticmaalka ka soo qeyb galayaasha.
Astaamaha Expo Event waxay ku habboonaayeen shirkii mashruuca ardaydeena. Taageeradu waxay ahayd mid aad uwanaagsan kahor iyo intii ay socdeenba.
Golaha Horumarinta Dhaqaalaha Texas
Tilmaamaha Accelevents waa kuwo dareen leh oo si fudud loo isticmaali karo. Adeegga macaamiisha waa mid laga cabsado oo waayo-aragnimada aad uga sii wanaagsan!
Ururka Texas ee Guddiyada Iskuulka
Jawaabta degdega ah ee jawaabta waa mid weyn! Sidoo kale, waxaan jecel nahay sida loo habeyn karo madalku. Dib u cusbooneysiinta joogtada ah sidoo kale waa weyn tahay sababtoo ah waxaan dareemeynaa inaan maqalno markaan bixinno jawaab celin.
Hel adiga bartaan on
Akhriso fikradaheena udambeeyay ee dhacdooyinka, tikniyoolajiyadda, koritaanka shaqada iyo waxyaabo kale oo badan.
8 Talooyin Miisaaniyadda Dhacdooyinka Qorshe kasta oo Dhacdo ah inuu Ogaado
By Tania Haashim
16 Sababood oo ah Sababta Aad u Dooran Laheyd Madal Dhammaan Dhacdooyinka
Dhammaan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Sida Loo Abuuro Shir-Weyn Online Ah Oo Ku guuleysta
7 Sababood oo ah Sababta Dhacdooyinka Virtual-ka ahi u yihiin Aaladda Suuqgeynta Aasaasiga ah
Astaamaha Ugu Dambeeya Ee Aad Ku Doonto Barxad Qorsheynta Dhacdooyinka Onlineka ah
5ta Qodob ee Ugu Waawayn Waa inaad Ka Fiirsataa Si Aad U Badbaadiso Dhacdadaada Isku Dhafan
6 Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Dhacdooyinka ugu Fiican ee Kordhiya Khibradahaaga Dhacdooyinka Isku-dhafan
6-da Qodob ee ugu waawayn ee laga fiirsado Marka la martigalinayo Shirka Virtual ama Hybrid ee waara
Maxaa la tixgelinayaa Marka la dooranayo Goob Dhacdo Isku Jir ah
Sida loo Maareeyo Ka-qayb-galayaasha Ka-Meel-Gaarka ah Dhacdooyinka Hab-dhaqanka ah
12 Ways Oo Loo Dhiso Dakhli Iyadoo Lagu Jiro Dhacdo Isku Jir Ah
Soo Celinta Lead ee Dhacdooyinka Virtual iyo Hybrid
Events way isbedelayaan. Marna ha seegin garaacis.
Saxiix wargeyskeena si aad u hesho wararkeena ugu dambeeyay, istaraatiijiyado, tabo, fikrado, cusbooneysiinta alaabada iyo waxyaabo kale oo badan.
Ku Saabsan Xawaareynta
Kusoo Biir Accelevents
Blogs & Fahanka
Xuquuqda daabacaadda 2021 Accelevents
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Shuruudaha Isticmaalka